फेसबुकमा माया बसेर विवाह गरेकी मेरी छोरीलाई परिवार मिलेर …. – Sunaulo Nepal TV
फेसबुकमा माया बसेर विवाह गरेकी मेरी छोरीलाई परिवार मिलेर ….
आजभोली महिलाहरुको रहस्यमय निधनले समाज र परिवारलाई चिन्तित बनाएको छ । फेरी मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरमा एक युवतीको शव कोठाभित्र फेला परेको थियो । उनी विवाहिता थिइन् । उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवईमा छन् ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरकी २१ वर्षीय रोजिना गिरी (काफ्ले) को मृत्यु भएको यतिका दिनसम्म पनि पो’स्टमा’र्टम हु’न सकेको छैन । आइतबार बिहान सात बजे आफ्नै घरको कोठामा मृत भेटिएकी रोजिनाको शव सोही दिन लगिएको भएपनि दुई परिवारबीचको द्वन्द्वका कारण पो’स्टमा’र्टम हु’न नसकेको हो ।
आइतबार वडाध्यक्ष खेमप्रसाद न्यौपाने र प्रहरीको समन्वयमा रोजिनाको शव पो’स्ट’मार्टमका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइएको थियो । माइती पक्षले शव उठाउन नदिने अडान राख्दाराख्दै पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधिको चर्को दबाबका कारण पोस्ट’मा’र्ट’मका लागि धरान लगेको पीडितका आफन्तको दाबी छ । तर अहिलेसम्म पोस्टमार्टम नहुनुले आशङ्का उत्पन्न गराएको मृतककी सानिमा रमिला गिरी बताउँछिन् ।
‘सोमबार नै प्रहरी प्रशासनले पो’स्ट’मार्ट’मको तयारी गरेको थियो तर पछि रोजिनाका घरपट्टीका मान्छे फेला पार्न नसकेको भन्दै पो’स्टमा’र्टम गरेन’, उनले भनिन्, ‘रोजिनाको मृत्यु भएपछि नै घरपट्टीका सबै प्रहरी सुरक्षामा थिए । प्रहरीले कसरी पक्राउ गर्न सकेन ? २४ घण्टाभित्र गरिसक्नुपर्ने पो’स्ट’मार्टम अहिलेसम्म नहुँदा श’ङ्का उ’ब्जिएको छ । ’
कोठामा भित्रबाट चुकुल लगाएको अवस्थामा भेटिएको रोजिा गिरी (काफ्ले) को शव फेला परेको थियो । मृतकका पति विनोद काफ्ले पनि दुबईबाट आइसकेका कारण आज पो’स्टमा’र्टम हुने र केही दिनमा रिपोर्ट आउने खनालले जानकारी दिएका थिए ।’
माइतीपक्षले भने रोजिनालाई ह’त्या ग’रे’र झु’न्डा’एको भन्दै सोमबार नै किटानी जाहेरी दिएका थिए । रोजिनाका बुबा धर्मानन्द गिरी र आमा ईन्दिरा गिरीले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा किटानी जाहेरी दिएको इन्स्पेक्टर खनालले जानकारी दिए ।
Previous संक्रमणले रोजगारी गुमाएका गरिबलाई १० हजार
Next यिनै हुन् निर्दय प्रेमी जसले आफ्नो गर्भवती प्रेमिकालाई भिर बाट ….. (भिडियो सहित)